UPS raki-daza patanty hanaiky Bitcoin for fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana - Blockchain News
Febroary 1, 2018 Admin
UPS raki-daza patanty hanaiky Bitcoin for fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana
Global sambo goavana UPS no mijery manaiky Bitcoin alalan'ny fisoloana akanjo fifanakalozana item-service, vao namoaka patanty filings mampiseho.
UPS dia, hitily ny rafitra ny fisoloana akanjo banky izay afaka mandray dizitaly ampy fandoavam-bola, Araka ny fangatahana navoakan'ny U.S. Patanty sy ny famantarana Office (USPTO) alakamisy. Ankoatra ny nentim-paharazana ny rafitra fandoavam-bola, ny fanamarinana ny lisitr'ireo famenoana Bitcoin ho toy ny azo atao amin'ny vola mba handoavana.
Ny famenoana mamaritra fomba isan-karazany ny renters dia afaka mandoa ny fisoloana akanjo, milaza manokana:
"In ohatra embodiments, ny fisoloana akanjo banky iray dia mety ahitana hevitra-of-fivarotana (pos) rafitra fa nandray vola avy amin'ny mpampiasa amin'ny endrika: … Bitcoin; sy / na ny (5) hafa mety karazana fandoavam-bola. "
In 2017, mihoatra ny 20 patanty filings navoakan'ny USPTO Bitcoin voalaza ho toy ny rafitra fandoavam-bola azo atao. Raha ny isan'ny kely nilatsaka avy 2016, mihoatra ny 50 patanty filings navoakan'ny sampan-draharaha tao anatin'ny roa taona taratry Izany fomba fisainana izany.
Blockchain News 31 Janoary 2018
Zavatra hafatra h ...
Grika fitsarana ho fanampiny ...
Previous Post:MasterCard ny CFO: Cryptocurrency boosting fividianana ireo mpanjifa ny fandaniana
Next Post:Blockchain Observatory sy Forum mba hitondra EU ny "nitarika" ny Blockchain Tech